Qisada heesta "Suleekhaay araggaagu" iyo abwaan Hadraawi. - Yaxye Yeebaash
Home Qoraallo Qisada heesta “Suleekhaay araggaagu” iyo abwaan Hadraawi.
Hadraawi iyo afar nin oo ay jaal ahaayeen ayaa waxa ay ka soo guureen Cadan iyaga oo yimi magaalada Muqdisho. Guriga ay degeen midka ka soo hor jeeda waxa u hoyata gabadh aad u qurux badan. Marka laga reebo Hadraawi, afarta nin ee kale waxa ay la dhacsanaayeen quruxda gabadha. Waxa ay guriga ka samaysteen dalool ay ka eegaan gabadha. Midba midka kale isaga oon arkayn ayaa uu daloolka ka eegaa.
Maalin uu roob weyni da’ay waxa dhacday in daad xad-dhaaf ihi soo galay gurigii ay deggenaayeen. Hadraawi oo magaalada ka yimi ayaa soo galay iyada oo guriga daadku qulqulayo. Waxa uu arkay afartii nine e kale oo iyagu ku hawlan In ay gurigii inanta daadka iyo biyaha ka soo saaraan, halka koodii biyuhu cimidh yihiin!
Muddo kadib ayaa afartii nin is ogaadeen. Waxa ay ula yimaaddeen sheekadii abwaanka.
Halkii ayaa uu ku curiyay heesta la magacbaxday “Suleekhaay araggaagu!”. Heestaa markii la qaaday ayaa ay inantii si wacan u dhegaysatay oo ay fahantay. Markii riwaayaddii laga yimi ayaa ay inantii wiilashii ku sii sugtay kaabaddii guriga. Waxa ay u sheegtay in ay go’aan gaadhaan oo ay iyada u soo cugtamaan. Hadraawi na waxa uu soo jeediyay in ay iyadu mid doorato. Halkii ayay ku dooratay oo ay ku calfatay afartii wiil mid ka mid ah.
Heesta oo qoran halkan ka akhriso:
Idaa subag laga lulaa,
Geel baa sidig loo ogaa,
Sareedo Illaahay baa leh,
Haddaan quruxdooda saanyo,
Saddex bay ku qaddaaye,
Dhexda soohane tooxda,
Biixiyaa isa saran,
Sanqaroorka la dhiibshaa,
Saatirkii ku abuuree,
Baalashooda ku saabshee,
Hareeraa kaga seeraa,
Cabbaadhyaa ku sargooyiyo,
Timahaagan ku seexdee,
Sararaa ka degaayee,
Saaray baanad ahayne,
Surradaan la dhigaynin,
Soodh halbowlaha gooya,
Nin ka saahidey oonta,
Ha ka goynin salaanta.
Previous articleNin Reer Miyi ah oo Si Cajiib ah u Gabyaya!
Next articleHooyo Buraanbur Qurux Badan Akhriyaysa
halyey qaran January 25, 2021 At 6:13 am
ilahay cimriga iyo caafimaadka haw barakeeyo abwaan hadraawi adigana khayr ayaan kuu rajaynayaa yahya